နိုငျငံ၊ လူမြိုးနှငျ့ အခြုပျအခွာ အာဏာကို စောငျ့ရှောကျသော ဥပဒေ (အပိုငျး ၁) – Kyaw Zaw Oo's Blog
June 24, 2016 November 19, 2019 kyaw zaw oo
နိုင်ငံ၊ လူမျိုးနှင့် အချုပ်အခြာ အာဏာကို စောင့်ရှောက်သော ဥပဒေ (အပိုင်း ၁)
■ ရှုံးနေရင်းကကို အကျောတွေ ပေးပေးနေရ
တစ်ခါတလေ ကစားပွဲ (Game)တွေမှာ မိမိကိုယ်နှိုက်က လက်ခံတဲ့အတွက် အကျောပေးတဲ့ အနေနဲ့ဖြစ်စေ မလွှဲမရှောင်သာတော့လို့ဖြစ်စေ ရွေးချယ်စရာ မရှိတော့လို့ဖြစ်စေ ကစားပွဲရဲ့စည်းမျဉ်းများ (Rule of the Game) တွေဟာ မျှတခြင်းမရှိကြောင်း သိသိကြီးနဲ့ကို အကြောင်းကြောင်းသော အကြောင်းကြောင်းတို့ကို အကြောင်းပြုပြီး သကာလ အဲဒီစည်းမျဉ်းတွေကို လက်ခံကာ ပါဝင်ကစားကြရတဲ့ ကစားပွဲတွေ ရှိတတ်ကြတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အနီးစပ်ဆုံးပြရရင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု ၁၉၈၂-နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ဥပဒေနဲ့ စိစစ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်မှာ စစ်ဆေးမှု လုပ်လိုက်တိုင်း လုပ်လိုက်တိုင်း မိမိတို့ဘက်က ရှုံးနေတဲ့အရှုံး တစ်ခုရှိတယ်။ ဟုတ်ပြီ . . . ၈၂ နဲ့ စစ်တာတော့ ဟုတ်ပြီ၊ စစ်လိုက်လို့ နိုင်ငံသားမဖြစ်ထိုက်ကြောင်း တွေ့ရှိရသူတွေကိုကျတော့ ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ အမေးကို မေးကြည့်ရင် ကိုယ်ဘာ ရှုံးနေသလဲဆိုတာကို မြင်ရပါတယ်။ ဒီတရားမဲ့ ရောက်ရှိနေသူတွေကို ဥပဒေနဲ့အညီ ထောင်ချမှာလား၊ ထောင်ချပြီးလို့ ထောင်ကလွတ်လာရင် ဘယ်ကိုပို့မှာလဲ၊ ဘင်္ဂလားဘက်ကို အတင်းပြန်ပို့မလား၊ ပင်လယ်ထဲက ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်ကို ပို့မလား၊ ထောင်မှာ မဆံ့ရင်ကော ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ကုန်းပေါ်က ကန့်သတ်နယ်မြေတစ်ခုမှာ သံဆူးကြိုး ခြံစည်းရိုး ခတ်ထားမလား၊ ဒါမှမဟုတ် ခိုးဝင်မှန်းသိတဲ့သူတွေကို အခုနေအတိုင်း INGO တွေက ဒေသခံလူနည်းစုတွေကို မပေးတဲ့ ထောက်ပံ့မှု အတိုင်းအတာတွေပေး အားဆေးတွေထိုးပြီး ပြုစုပျိုးထောင်ထားမလား …။ ကျွန်တော် တို့မှာတော့ မေးခွန်းတွေပဲရှိနေတယ်။ ဒေသခံ မြို၊ ခမီ၊ ဒိုင်းနက်၊ ရခိုင် စတာတွေထက် ခိုးဝင်တွေကို ပိုမိုအားကောင်းအောင် နိုင်ငံတကာ အထောက်အပံ့ ဒလဟောပေးခွင့်ကို တာဝန်မဲ့စွာနဲ့ ဒီအတိုင်းပဲ ပေးထားမှာကိုလည်း သိနေတယ်။
ဒီကစားပွဲ (Game) မှာ ပုံစံက ဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုတော့ ‘ငါတော့ မရှုံးဘူး၊ ဖဲတစ်ပွဲချင်း တစ်လက်ချင်းမှာ ငါ နည်းနည်းစီ နိုင်မယ်၊ မင်းလက်ထဲမှာ ပါလာတဲ့ပိုက်ဆံတွေ အကုန်ကုန်ပြီး ငါ့လက်ထဲကိုရောက်တော့မှ ဖဲဝိုင်းပြီးမယ်’ ဆိုသလိုမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ ၁၉၈၂ ဥပဒေကို ဖောက်ဖျက် လီဆယ် ပြီးတော့ ဘင်္ဂါလီတွေကို ပြုနိုင်ငံသား နည်းနည်းချင်း ပေးသွားမယ်၊ ကျန်တဲ့ တရားမဲ့ ရောက်ရှိ နေသူတွေကို ဒီအတိုင်းထားမယ်၊ ခုနက ပြုနိုင်ငံသား ဖြစ်သွားတဲ့သူနဲ့ မဖြစ်သေးတဲ့ သူတွေနဲ့ လက်ထပ်မယ်၊ ကလေးတွေမွေးမယ်၊ လက်မထပ်လည်း ပြဿနာမရှိဘူး၊ ဖမ်းမှ မဖမ်းတာကိုး …။ ဒီလိုနဲ့ အချိန်တွေ နောက် နည်းနည်း ကြာလာတဲ့အခါ နောက်တစ်ခါ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး လုပ်တယ်ဆိုတာကြီးကို နောက်ထပ်လုပ်ပြန်ဦးမယ် …။ ဒီလိုနဲ့ ပုံမှန် လူဦးရေတိုးနှုန်းထက် မကသော နှုန်းထားနဲ့ တိုးနေတဲ့ ပြင်ပလူအုပ်စု တစ်စုဟာ နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်သွားမယ်။ အဲဒီလူအုပ်စုဟာ လူဦးရေ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်နေတဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကလူတွေ နောက်ထပ် ၀င်လာဖို့အတွက်ရာ အခိုင်အမာ စခန်းထောက်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးတို့မှာ နေရာရပြီး ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာဟာလည်း စည်းပေါက်ယွင်းယိုတဲ့ Compromised ဖြစ်သွားတဲ့ အခြေအနေ ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ မေးခွန်းက ဒီလို …၊ ဟုတ်ပြီ၊ ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေနဲ့ ဒီဘင်္ဂါလီတွေကို စစ်မယ်။ စစ်လို့ (ပြု)နိုင်ငံသား ဖြစ်တဲ့လူ ဖြစ်လာမယ်၊ ဟုတ်ပြီ၊ နိုင်ငံသားပေးလိုက်ပါ၊ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံသား ဖြစ်ထိုက်ကြောင်း မတွေ့ရဘဲ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ရောက်နေတဲ့သူတွေကို ဘာလုပ်ကြမှာလဲ …။
‘မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ’ ရဲ့ အပိုဒ်-၂၈ မှာ ဒီလိုပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။ ‘၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇွန်န၀ါရီလ ၄ ရက် နေ့မှစ၍ နိုင်ငံတော်အတွင်းသို့ မတရားသော နည်းလမ်းဖြင့် ၀င်ရောက်လာကြပြီး နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ နေထိုင်လျက်ရှိသော နိုင်ငံခြားသားများသည် ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် နေ့ရက်ကို နောက်ဆုံးထား၍ နိုင်ငံတော်မှ ထွက်ခွာသွားရမည်’ လို့ ဆိုထားတယ်။ သူ့ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အပိုဒ်-၂၉ ကတော့ ထွက်ခွာသွားခြင်း မပြုရင် တည်ဆဲဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအရ အရေးယူရမည်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဖော်ပြထားတဲ့ အရေးယူနိုင်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက် သုံးမျိုးအနက် တစ်မျိုးကတော့ ၁၉၄၇ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး (လတ်တလော ပြဋ္ဌာန်းချက်များ) အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၃ (၁) ဖြစ်ပါတယ်။ တရားဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ ၀င်ရောက်နေထိုင်သူတွေကို ပုဒ်မ ၁၃ (၁) အရ ထောင်ခြောက်လကနေ ငါးနှစ်အတွင်းဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံး ဒဏ်ငွေ ကျပ် ၁၅၀၀ ဖြစ်စေ၊ နှစ်မျိုးစလုံးဖြစ်စေ ချမှတ်စီရင်ရမယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။
ဥပဒေအတိုင်း တိတိကျကျဖြစ်ရမယ့် ဥစ္စာတွေကို အထက်မှာ ဥပဒေ အချက်အလက်တွေ ဘာတွေနဲ့ ပြောခဲ့တာကို လူနားလည်လွယ်အောင် ပြန်ပြောရရင် … လူတစ်သန်းလား ဘာလား ဒီမှာ ရောက်နေတယ်၊ ဘာကတ်မှ မရှိဘူး၊ ဒီတော့ ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်အရဆိုရင် နိုင်ငံခြားသားတွေ ဖြစ်နေတယ်၊ ဥပဒေအတိုင်း အရေးယူမယ်ဆိုရင် သူတို့ကို ဒီမြေကနေ ထွက်သွားစေရမယ်၊ မသွားဘူးလား … ထောင်ချရမယ်။ ဒါက သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်ရမယ့် သဘောကို လိုရင်းတိုရှင်း ပြောပြတာ။
ကဲ ဒီတော့ အထက်မှာ ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ ရေးထားတာတွေကို အချုပ်ပြုလို့ပြောရမယ်ဆိုရင် ဘာပဲပြောပြော … ရေမျောကမ်းတင်တွေကို ကုန်းပေါ်က ဘယ်လိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မူဝါဒ တစ်ခုခု ကျွန်တော်တို့ မျက်စိရှေ့မှာ ထင်သာမြင်သာ ရှိမနေဘူးလို့ပဲ ပြောရပါလိမ့်မယ်။
■ ၈၂ ဥပဒေမှာ အပေါက်တွေ ပေါက်နေတယ် ဆိုတာ မှန်သလား
နိုင်ငံတကာ INGO နဲ့ UN bodies တွေရဲ့ အကြီးအကဲအချို့နဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ကျွန်တော်နဲ့ သီးခြား တွေ့ဆုံဖြစ်ခဲ့ ကြစဉ်မှာ သူတို့ဘက်က ပြောတာရှိတယ်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေနဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကို စိစစ်လိုက်ရင် အကုန်လုံးနီးပါးက နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက် အခိုင်အမာ ရှိနေတယ်လို့ သူတို့က ဆိုတယ်။ ကျွန်တော်က လုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့ ငြင်းတယ်။ သူတို့ကတော့ အဓိပ္ပာယ်ပါတဲ့ အပြုံးတွေကို ပြုံးပြပါတယ်။ ငါတို့ ဖဲချိုးထားတာကို ဒီငနဲ သိပုံမရဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။
အလားတူပဲ ပြီးခဲ့တဲ့သုံးပတ်လောက်က မြန်မာ့အရေးကျွမ်းကျင်သူ (အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံထဲက ဘင်္ဂါလီများအရေး) ကို ကျွမ်းကျင်သူ နိုင်ငံခြားသား စာရေးသူတစ်ဦးက တွေ့ချင် ပြောချင်ပါတယ်ဆိုလို့ ကျွန်တော့် နေအိမ်ကို ရောက်လာပြီး အလွတ်သဘော ပြောကြရာမှာ သူကလည်းပဲ ဒီသဘောကို ပြောပါတယ်။ အဓိက,ကတော့ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ၀န်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ရီကလည်း ဘင်္ဂါလီတော်တော်များများ နိုင်ငံသား ရသွားနိုင်တယ်လို့ ပြောဖူးကြောင်းကို ထောက်ပြတယ်။ ၈၂-ဥပဒေ အာဏာသက်ရောက်မှု မရှိခင်ကာလက နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသူတွေဟာ နိုင်ငံသား ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ အဓိက သက်ဆိုင်တယ်လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ မြေပုံမှာစစ်ဆေးတဲ့ အခါ ဒီလို မရမက ဖောက်ထားတဲ့ အပေါက်ကို သုံးပြီးတော့ လျှောက်ထားသူတွေထဲက တော်တော်များများကို နိုင်ငံသားနဲ့ ပြုနိုင်ငံသားတွေအဖြစ်ကို ပေးခဲ့တယ်။ ကိန်းဂဏန်းအတိအကျဆိုရင် နိုင်ငံသား ၄၀ နဲ့ ပြုနိုင်ငံသား ၁၆၉ ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုမကျေနပ်တဲ့ မြေပုံ မြို့သူမြို့သားတွေဟာ ပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေ မြေပုံမြို့ကို ရောက်လာတဲ့အခါ တစ်မြို့လုံး အိမ်တံခါး ဈေးဆိုင်တံခါးတွေပိတ်ပြီး အသံတိတ် ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။
ဒီတော့ သူတို့တွေပြောနေသလို တကယ်ပဲ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေမှာ ယိုပေါက်တွေ ပေါက်နေခြင်း ဟုတ်မဟုတ် အများပြည်သူသိအောင် ဖော်ထုတ်ပြောပြဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ ၈၂ ဥပဒေ အာဏာသက်ရောက်မှု မရှိခင် ကာလက နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသူတွေဟာ နိုင်ငံသား ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ၈၂ ဥပဒေရဲ့ ပုဒ်မ ၆ ကို အသေအချာ စေ့စေ့ငုငု အနုလုံပဋိလုံ သုံးသပ်ကြည့်ကြပါမယ်။
၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ က ဒီလိုဆိုပါတယ်။ ‘ဤဥပဒေ အာဏာ တည်သည့်နေ့တွင် နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသူသည် နိုင်ငံသားဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ပုဒ်မ ၁၈ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် ငြိစွန်းလျှင် ယင်းပုဒ်မ အရ အရေးယူခြင်းခံရမည်’ လို့ ဖော်ပြထားတယ်။ ပုဒ်မ ၆ ထဲမှာ တစ်ခါတည်း ထည့်သွင်း ဆက်စပ်ဖော်ပြထားတဲ့ ပုဒ်မ ၁၈ ကတော့ဖြင့် မမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ နိုင်ငံသား ရတာဆိုရင် ‘နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းခံရမည့် အပြင်’ ပြစ်ဒဏ်ကျခံရမယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ပုဒ်မဖြစ်ပါတယ်။ ပုဒ်မ ၁၈ အောက်ဘက်က ပုဒ်မ ၂၀ (က)မှာ နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ ဘယ်လို ရုပ်သိမ်းမလဲဆိုတာကို ဖော်ပြထားတယ်။ ‘ပုဒ်မ ၂၀ (က) နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ ရပ်စဲခံရသူ၊ သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခံရသူ၏ နိုင်ငံသား လက်မှတ်ကို ပယ်ဖျက်ရမည်’’ လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင် ပြောရရင် ၁၉၈၂ ဥပဒေ စတင်အာဏာတည်တဲ့နေ့ (၁၅-၁၀-၁၉၈၂) ရက်နေ့မတိုင်မီ နိုင်ငံသား ဖြစ် ‘ပြီး’ သူဆိုတာ ‘အဲဒီတုန်းက ချွန်ဒေါ် မရန်မာ နိုင်ငံသားလေ …၊ အဲဒီတုန်းက ချွန်ဒေါ့အမားက နိုင်ငံသား ဖစ်ပီးပီ’ စသည်ဖြင့် မိမိပါးစပ်က ပြောတဲ့သူ၊ သူခိုးအချင်းချင်း တစ်ယောက်တစ်လှည့် ထောက်ခံပေးခြင်း ခံရသူတွေကို နိုင်ငံသား ဖြစ်ပြီးသူတွေလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘူး၊ မြန်မာနိုင်ငံသားလက်မှတ် ရပြီးသူများကိုသာ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီမှာ ဟိုးကတည်းက ကျွန်တော်တို့ ရောက်နေပြီးသားလေ ဆိုတာမျိုး အချင်းချင်း ထောက်ခံပေးတာ လောက်အားဖြင့် ၈၂ ဥပဒေ မပြဋ္ဌာန်းခင်ကတည်းက နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသား ဖြစ်တယ်ရယ်လို့ ကောက်ယူ အလုပ် မလုပ်ကြပါနဲ့။ နိုင်ငံသားလက်မှတ် ထုတ်ပေး ခံရပြီးသူဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လက်မှတ် ပျောက်သွားပါတယ် ဆိုရင်တောင်မှ နိုင်ငံသားလက်မှတ်ကို မှန်ကန်စွာ ထုတ်ပေးထားတာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေဟာ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံသားလက်မှတ် ထုတ်ပေးတဲ့ရုံးမှာ ကျန်နေမှာဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှတ်တမ်းကို ရည်ညွှန်းနိုင်ဖို့ အနည်းဆုံး လိုအပ်မယ်။
ဒီတော့ ၈၂ ဥပဒေ ပုဒ်မ-၆ က ဆိုတာက ရှင်းရှင်းလေး … (၁၅-၁၀-၁၉၈၂) မတိုင်ခင် နိုင်ငံသားလက်မှတ် ရပြီးသားသူဟာ နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြောင်း ဆိုလိုတယ်။ ပိုပြီးတော့ တိတိကျကျ ပြောရမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံသားလက်မှတ် (၁၉၄၈ နိုင်ငံသား ဖြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ နှစ်ခုအနက် တစ်ခုခုအရ ထုတ်ပေးတဲ့ နိုင်ငံသားလက်မှတ်) လက်ကိုင်ရှိတဲ့သူကိုမှ နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသူလို့ သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်။ (အရင် ဥပဒေအဟောင်းဖြစ်တဲ့) ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှု အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆(၁) အရ ဒွိဟဖြစ်နိုင်စရာရှိတဲ့ သူကို နိုင်ငံသားပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပုဒ်မ ၆(၂)အရ ယတိပြတ် သံသယ ကင်းနိုင်တဲ့သူကို နိုင်ငံသားပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပေးအပ်လိုက်တဲ့ နိုင်ငံသားကတ်ပြားတွေမှာ ၆ (၁) ဒါမှမဟုတ် ၆(၂) လို့ ပါရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲသလို ရေးမှတ် ပုံနှိပ် ပါရှိတဲ့ နိုင်ငံသားလက်မှတ်တွေကို ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ သူတွေကိုမှသာလျှင် (ယခု တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်တဲ့) ၁၉၈၂ နိုင်ငံသား ဥပဒေက အဲဒီလူတွေဟာ နိုင်ငံသားဖြစ် ‘ပြီး’သူ တွေဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ (အခြားတစ်ဖက်မှာ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေကျတော့ မွေးရာပါအခွင့်အရေးအရ နိုင်ငံသားဖြစ်ကြသူတွေ (Citizens by Birth) ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေ၊ မျိုးနွယ်စုတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ မှာ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ဒီတော့ နိုင်ငံသားဖြစ် ‘ပြီး’ သူ ဆိုတာ မွေးရာပါ အခွင့်အရေးအရ နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသား ဟုတ်ရင်ဟုတ်၊ မဟုတ်ရင် ‘နိုင်ငံသား လက်မှတ်’ ရပြီးသားသူ ဖြစ်ရမယ်။
၂၀၁၆-ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၄) ရက်၊ (သောကြာနေ့)
■ ရှုံးနရေငျးကကို အကြောတှေ ပေးပေးနရေ
တဈခါတလေ ကစားပှဲ (Game)တှမှော မိမိကိုယျနှိုကျက လကျခံတဲ့အတှကျ အကြောပေးတဲ့ အနနေဲ့ဖွဈစေ မလှဲမရှောငျသာတော့လို့ဖွဈစေ ရှေးခယျြစရာ မရှိတော့လို့ဖွဈစေ ကစားပှဲရဲ့စညျးမဉျြးမြား (Rule of the Game) တှဟော မြှတခွငျးမရှိကွောငျး သိသိကွီးနဲ့ကို အကွောငျးကွောငျးသော အကွောငျးကွောငျးတို့ကို အကွောငျးပွုပွီး သကာလ အဲဒီစညျးမဉျြးတှကေို လကျခံကာ ပါဝငျကစားကွရတဲ့ ကစားပှဲတှေ ရှိတတျကွတယျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ အနီးစပျဆုံးပွရရငျ ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံ ဥပဒေ ဖွဈပါတယျ။
အခု ၁၉၈၂-နိုငျငံသားဖွဈမှု ဥပဒနေဲ့ စိစဈတဲ့ ဖွဈစဉျမှာ စဈဆေးမှု လုပျလိုကျတိုငျး လုပျလိုကျတိုငျး မိမိတို့ဘကျက ရှုံးနတေဲ့အရှုံး တဈခုရှိတယျ။ ဟုတျပွီ . . . ၈၂ နဲ့ စဈတာတော့ ဟုတျပွီ၊ စဈလိုကျလို့ နိုငျငံသားမဖွဈထိုကျကွောငျး တှရှေိ့ရသူတှကေိုကတြော့ ဘာလုပျမလဲဆိုတဲ့ အမေးကို မေးကွညျ့ရငျ ကိုယျဘာ ရှုံးနသေလဲဆိုတာကို မွငျရပါတယျ။ ဒီတရားမဲ့ ရောကျရှိနသေူတှကေို ဥပဒနေဲ့အညီ ထောငျခမြှာလား၊ ထောငျခပြွီးလို့ ထောငျကလှတျလာရငျ ဘယျကိုပို့မှာလဲ၊ ဘင်ျဂလားဘကျကို အတငျးပွနျပို့မလား၊ ပငျလယျထဲက ကြှနျးတဈကြှနျးပျေါကို ပို့မလား၊ ထောငျမှာ မဆံ့ရငျကော ဘယျလိုလုပျမလဲ၊ ကုနျးပျေါက ကနျ့သတျနယျမွတေဈခုမှာ သံဆူးကွိုး ခွံစညျးရိုး ခတျထားမလား၊ ဒါမှမဟုတျ ခိုးဝငျမှနျးသိတဲ့သူတှကေို အခုနအေတိုငျး INGO တှကေ ဒသေခံလူနညျးစုတှကေို မပေးတဲ့ ထောကျပံ့မှု အတိုငျးအတာတှပေေး အားဆေးတှထေိုးပွီး ပွုစုပြိုးထောငျထားမလား …။ ကြှနျတျော တို့မှာတော့ မေးခှနျးတှပေဲရှိနတေယျ။ ဒသေခံ မွို၊ ခမီ၊ ဒိုငျးနကျ၊ ရခိုငျ စတာတှထေကျ ခိုးဝငျတှကေို ပိုမိုအားကောငျးအောငျ နိုငျငံတကာ အထောကျအပံ့ ဒလဟောပေးခှငျ့ကို တာဝနျမဲ့စှာနဲ့ ဒီအတိုငျးပဲ ပေးထားမှာကိုလညျး သိနတေယျ။
ဒီကစားပှဲ (Game) မှာ ပုံစံက ဘယျလိုဖွဈနသေလဲဆိုတော့ ‘ငါတော့ မရှုံးဘူး၊ ဖဲတဈပှဲခငျြး တဈလကျခငျြးမှာ ငါ နညျးနညျးစီ နိုငျမယျ၊ မငျးလကျထဲမှာ ပါလာတဲ့ပိုကျဆံတှေ အကုနျကုနျပွီး ငါ့လကျထဲကိုရောကျတော့မှ ဖဲဝိုငျးပွီးမယျ’ ဆိုသလိုမြိုး ဖွဈနတေယျ။ ၁၉၈၂ ဥပဒကေို ဖောကျဖကျြ လီဆယျ ပွီးတော့ ဘင်ျဂါလီတှကေို ပွုနိုငျငံသား နညျးနညျးခငျြး ပေးသှားမယျ၊ ကနျြတဲ့ တရားမဲ့ ရောကျရှိ နသေူတှကေို ဒီအတိုငျးထားမယျ၊ ခုနက ပွုနိုငျငံသား ဖွဈသှားတဲ့သူနဲ့ မဖွဈသေးတဲ့ သူတှနေဲ့ လကျထပျမယျ၊ ကလေးတှမှေေးမယျ၊ လကျမထပျလညျး ပွဿနာမရှိဘူး၊ ဖမျးမှ မဖမျးတာကိုး …။ ဒီလိုနဲ့ အခြိနျတှေ နောကျ နညျးနညျး ကွာလာတဲ့အခါ နောကျတဈခါ နိုငျငံသားစိစဈရေး လုပျတယျဆိုတာကွီးကို နောကျထပျလုပျပွနျဦးမယျ …။ ဒီလိုနဲ့ ပုံမှနျ လူဦးရတေိုးနှုနျးထကျ မကသော နှုနျးထားနဲ့ တိုးနတေဲ့ ပွငျပလူအုပျစု တဈစုဟာ နိုငျငံသားတှေ ဖွဈသှားမယျ။ အဲဒီလူအုပျစုဟာ လူဦးရေ ပေါကျကှဲမှုဖွဈနတေဲ့ အိမျနီးခငျြးနိုငျငံကလူတှေ နောကျထပျ ဝငျလာဖို့အတှကျရာ အခိုငျအမာ စခနျးထောကျအနနေဲ့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လူမှုရေး၊ စီးပှားရေးနဲ့ နိုငျငံရေးတို့မှာ နရောရပွီး ဖွဈနလေိမျ့မယျ။ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အခြုပျအခွာအာဏာဟာလညျး စညျးပေါကျယှငျးယိုတဲ့ Compromised ဖွဈသှားတဲ့ အခွအေနေ ရောကျသှားပါလိမျ့မယျ။
ဒီတော့ မေးခှနျးက ဒီလို …၊ ဟုတျပွီ၊ ၁၉၈၂ ခုနှဈ နိုငျငံသားဖွဈမှုဥပဒနေဲ့ ဒီဘင်ျဂါလီတှကေို စဈမယျ။ စဈလို့ (ပွု)နိုငျငံသား ဖွဈတဲ့လူ ဖွဈလာမယျ၊ ဟုတျပွီ၊ နိုငျငံသားပေးလိုကျပါ၊ ဒါပမေဲ့ နိုငျငံသား ဖွဈထိုကျကွောငျး မတှရေ့ဘဲ မွနျမာနိုငျငံထဲမှာ ရောကျနတေဲ့သူတှကေို ဘာလုပျကွမှာလဲ …။
‘မွနျမာနိုငျငံသား ဥပဒဆေိုငျရာ လုပျထုံးလုပျနညျးမြား’ ရဲ့ အပိုဒျ-၂၈ မှာ ဒီလိုပွဋ်ဌာနျးထားတယျ။ ‘၁၉၄၈ ခုနှဈ ဇှနျနဝါရီလ ၄ ရကျ နမှေ့စ၍ နိုငျငံတျောအတှငျးသို့ မတရားသော နညျးလမျးဖွငျ့ ဝငျရောကျလာကွပွီး နိုငျငံသား မှတျပုံတငျ လကျမှတျကိုငျဆောငျခွငျးမရှိဘဲ နထေိုငျလကျြရှိသော နိုငျငံခွားသားမြားသညျ ပွညျထဲရေး ဝနျကွီးဌာနက သတျမှတျသညျ့ နရေ့ကျကို နောကျဆုံးထား၍ နိုငျငံတျောမှ ထှကျခှာသှားရမညျ’ လို့ ဆိုထားတယျ။ သူ့ရဲ့ နောကျဆကျတှဲ အပိုဒျ-၂၉ ကတော့ ထှကျခှာသှားခွငျး မပွုရငျ တညျဆဲဥပဒပွေဋ်ဌာနျးခကျြတှအေရ အရေးယူရမညျလို့ ဆိုထားပါတယျ။
ဖျောပွထားတဲ့ အရေးယူနိုငျတဲ့ပွဋ်ဌာနျးခကျြ သုံးမြိုးအနကျ တဈမြိုးကတော့ ၁၉၄၇ ခုနှဈ မွနျမာနိုငျငံ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေး (လတျတလော ပွဋ်ဌာနျးခကျြမြား) အကျဥပဒေ ပုဒျမ ၁၃ (၁) ဖွဈပါတယျ။ တရားဥပဒနေဲ့မညီတဲ့ ဝငျရောကျနထေိုငျသူတှကေို ပုဒျမ ၁၃ (၁) အရ ထောငျခွောကျလကနေ ငါးနှဈအတှငျးဖွဈစေ၊ အနညျးဆုံး ဒဏျငှေ ကပျြ ၁၅၀၀ ဖွဈစေ၊ နှဈမြိုးစလုံးဖွဈစေ ခမြှတျစီရငျရမယျလို့ ပွဋ်ဌာနျးထားတယျ။
ဥပဒအေတိုငျး တိတိကကြဖြွဈရမယျ့ ဥစ်စာတှကေို အထကျမှာ ဥပဒေ အခကျြအလကျတှေ ဘာတှနေဲ့ ပွောခဲ့တာကို လူနားလညျလှယျအောငျ ပွနျပွောရရငျ … လူတဈသနျးလား ဘာလား ဒီမှာ ရောကျနတေယျ၊ ဘာကတျမှ မရှိဘူး၊ ဒီတော့ ဥပဒသေတျမှတျခကျြအရဆိုရငျ နိုငျငံခွားသားတှေ ဖွဈနတေယျ၊ ဥပဒအေတိုငျး အရေးယူမယျဆိုရငျ သူတို့ကို ဒီမွကေနေ ထှကျသှားစရေမယျ၊ မသှားဘူးလား … ထောငျခရြမယျ။ ဒါက သတျမှတျ ပွဋ်ဌာနျးထားတဲ့အတိုငျး ဖွဈရမယျ့ သဘောကို လိုရငျးတိုရှငျး ပွောပွတာ။
ကဲ ဒီတော့ အထကျမှာ ဆငျ့ကဲဆငျ့ကဲ ရေးထားတာတှကေို အခြုပျပွုလို့ပွောရမယျဆိုရငျ ဘာပဲပွောပွော … ရမြေောကမျးတငျတှကေို ကုနျးပျေါက ဘယျလိုဖယျရှားမယျဆိုတဲ့ ရှငျးရှငျးလငျးလငျး မူဝါဒ တဈခုခု ကြှနျတျောတို့ မကျြစိရှမှေ့ာ ထငျသာမွငျသာ ရှိမနဘေူးလို့ပဲ ပွောရပါလိမျ့မယျ။
■ ၈၂ ဥပဒမှော အပေါကျတှေ ပေါကျနတေယျ ဆိုတာ မှနျသလား
နိုငျငံတကာ INGO နဲ့ UN bodies တှရေဲ့ အကွီးအကဲအခြို့နဲ့ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲအပွီး ကြှနျတျောနဲ့ သီးခွား တှဆေုံ့ဖွဈခဲ့ ကွစဉျမှာ သူတို့ဘကျက ပွောတာရှိတယျ။ ၁၉၈၂ ခုနှဈ နိုငျငံသားဖွဈမှုဥပဒနေဲ့ ဘင်ျဂါလီတှကေို စိစဈလိုကျရငျ အကုနျလုံးနီးပါးက နိုငျငံသားတှေ ဖွဈသှားနိုငျတယျဆိုတဲ့ ဥပဒပေိုငျးဆိုငျရာ သုံးသပျခကျြ အခိုငျအမာ ရှိနတေယျလို့ သူတို့က ဆိုတယျ။ ကြှနျတျောက လုံးဝမဟုတျဘူးလို့ ငွငျးတယျ။ သူတို့ကတော့ အဓိပ်ပာယျပါတဲ့ အပွုံးတှကေို ပွုံးပွပါတယျ။ ငါတို့ ဖဲခြိုးထားတာကို ဒီငနဲ သိပုံမရဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျ ဖွဈကောငျးဖွဈမယျ။
အလားတူပဲ ပွီးခဲ့တဲ့သုံးပတျလောကျက မွနျမာ့အရေးကြှမျးကငျြသူ (အထူးသဖွငျ့ မွနျမာနိုငျငံထဲက ဘင်ျဂါလီမြားအရေး) ကို ကြှမျးကငျြသူ နိုငျငံခွားသား စာရေးသူတဈဦးက တှခေ့ငျြ ပွောခငျြပါတယျဆိုလို့ ကြှနျတေျာ့ နအေိမျကို ရောကျလာပွီး အလှတျသဘော ပွောကွရာမှာ သူကလညျးပဲ ဒီသဘောကို ပွောပါတယျ။ အဓိက,ကတော့ လူဝငျမှု ကွီးကွပျရေး ဝနျကွီးဟောငျး ဦးခငျရီကလညျး ဘင်ျဂါလီတျောတျောမြားမြား နိုငျငံသား ရသှားနိုငျတယျလို့ ပွောဖူးကွောငျးကို ထောကျပွတယျ။ ၈၂-ဥပဒေ အာဏာသကျရောကျမှု မရှိခငျကာလက နိုငျငံသားဖွဈပွီးသူတှဟော နိုငျငံသား ဖွဈတယျဆိုတဲ့အခကျြနဲ့ အဓိက သကျဆိုငျတယျလို့ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
နောကျပွီးတော့ မွပေုံမှာစဈဆေးတဲ့ အခါ ဒီလို မရမက ဖောကျထားတဲ့ အပေါကျကို သုံးပွီးတော့ လြှောကျထားသူတှထေဲက တျောတျောမြားမြားကို နိုငျငံသားနဲ့ ပွုနိုငျငံသားတှအေဖွဈကို ပေးခဲ့တယျ။ ကိနျးဂဏနျးအတိအကဆြိုရငျ နိုငျငံသား ၄၀ နဲ့ ပွုနိုငျငံသား ၁၆၉ ဦး ဖွဈပါတယျ။ ဒါကိုမကနြေပျတဲ့ မွပေုံ မွို့သူမွို့သားတှဟော ပွညျနယျအာဏာပိုငျတှေ မွပေုံမွို့ကို ရောကျလာတဲ့အခါ တဈမွို့လုံး အိမျတံခါး စြေးဆိုငျတံခါးတှပေိတျပွီး အသံတိတျ ဆန်ဒပွခဲ့ကွတယျ။
ဒီတော့ သူတို့တှပွေောနသေလို တကယျပဲ ၁၉၈၂ ခုနှဈ မွနျမာနိုငျငံသားဥပဒမှော ယိုပေါကျတှေ ပေါကျနခွေငျး ဟုတျမဟုတျ အမြားပွညျသူသိအောငျ ဖျောထုတျပွောပွဖို့ လိုအပျလာပါတယျ။ ပထမဆုံးအခကျြအနနေဲ့ ၈၂ ဥပဒေ အာဏာသကျရောကျမှု မရှိခငျ ကာလက နိုငျငံသားဖွဈပွီးသူတှဟော နိုငျငံသား ဖွဈတယျဆိုတဲ့အခကျြနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ ၈၂ ဥပဒရေဲ့ ပုဒျမ ၆ ကို အသအေခြာ စစေ့ငေု့ငု အနုလုံပဋိလုံ သုံးသပျကွညျ့ကွပါမယျ။
၁၉၈၂ ခုနှဈ မွနျမာနိုငျငံသားဥပဒေ ပုဒျမ ၆ က ဒီလိုဆိုပါတယျ။ ‘ဤဥပဒေ အာဏာ တညျသညျ့နတှေ့ငျ နိုငျငံသားဖွဈပွီးသူသညျ နိုငျငံသားဖွဈသညျ။ သို့ရာတှငျ ပုဒျမ ၁၈ ပါ ပွဋ်ဌာနျးခကျြနှငျ့ ငွိစှနျးလြှငျ ယငျးပုဒျမ အရ အရေးယူခွငျးခံရမညျ’ လို့ ဖျောပွထားတယျ။ ပုဒျမ ၆ ထဲမှာ တဈခါတညျး ထညျ့သှငျး ဆကျစပျဖျောပွထားတဲ့ ပုဒျမ ၁၈ ကတော့ဖွငျ့ မမှနျကနျတဲ့နညျးလမျးနဲ့ နိုငျငံသား ရတာဆိုရငျ ‘နိုငျငံသားအဖွဈမှ ရုပျသိမျးခံရမညျ့ အပွငျ’ ပွဈဒဏျကခြံရမယျလို့ ပွဋ်ဌာနျးထားတဲ့ ပုဒျမဖွဈပါတယျ။ ပုဒျမ ၁၈ အောကျဘကျက ပုဒျမ ၂၀ (က)မှာ နိုငျငံသားအဖွဈမှ ဘယျလို ရုပျသိမျးမလဲဆိုတာကို ဖျောပွထားတယျ။ ‘ပုဒျမ ၂၀ (က) နိုငျငံသားအဖွဈမှ ရပျစဲခံရသူ၊ သို့မဟုတျ ရုပျသိမျးခံရသူ၏ နိုငျငံသား လကျမှတျကို ပယျဖကျြရမညျ’’ လို့ ဆိုပါတယျ။
ဒီတော့ ရှငျးရှငျးလငျးလငျးဖွဈအောငျ ပွောရရငျ ၁၉၈၂ ဥပဒေ စတငျအာဏာတညျတဲ့နေ့ (၁၅-၁၀-၁၉၈၂) ရကျနမေ့တိုငျမီ နိုငျငံသား ဖွဈ ‘ပွီး’ သူဆိုတာ ‘အဲဒီတုနျးက ခြှနျဒျေါ မရနျမာ နိုငျငံသားလေ …၊ အဲဒီတုနျးက ခြှနျဒေါ့အမားက နိုငျငံသား ဖဈပီးပီ’ စသညျဖွငျ့ မိမိပါးစပျက ပွောတဲ့သူ၊ သူခိုးအခငျြးခငျြး တဈယောကျတဈလှညျ့ ထောကျခံပေးခွငျး ခံရသူတှကေို နိုငျငံသား ဖွဈပွီးသူတှလေို့ ဆိုလိုတာ မဟုတျဘူး၊ မွနျမာနိုငျငံသားလကျမှတျ ရပွီးသူမြားကိုသာ ဆိုလိုတာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီမှာ ဟိုးကတညျးက ကြှနျတျောတို့ ရောကျနပွေီးသားလေ ဆိုတာမြိုး အခငျြးခငျြး ထောကျခံပေးတာ လောကျအားဖွငျ့ ၈၂ ဥပဒေ မပွဋ်ဌာနျးခငျကတညျးက နိုငျငံသားဖွဈပွီးသား ဖွဈတယျရယျလို့ ကောကျယူ အလုပျ မလုပျကွပါနဲ့။ နိုငျငံသားလကျမှတျ ထုတျပေး ခံရပွီးသူဖွဈဖို့ လိုအပျပါတယျ။ လကျမှတျ ပြောကျသှားပါတယျ ဆိုရငျတောငျမှ နိုငျငံသားလကျမှတျကို မှနျကနျစှာ ထုတျပေးထားတာ ဖွဈတဲ့အကွောငျး မှတျတမျးမှတျရာတှဟော သကျဆိုငျရာ နိုငျငံသားလကျမှတျ ထုတျပေးတဲ့ရုံးမှာ ကနျြနမှောဖွဈတယျ။ အဲဒီမှတျတမျးကို ရညျညှနျးနိုငျဖို့ အနညျးဆုံး လိုအပျမယျ။
ဒီတော့ ၈၂ ဥပဒေ ပုဒျမ-၆ က ဆိုတာက ရှငျးရှငျးလေး … (၁၅-၁၀-၁၉၈၂) မတိုငျခငျ နိုငျငံသားလကျမှတျ ရပွီးသားသူဟာ နိုငျငံသားတှဖွေဈကွောငျး ဆိုလိုတယျ။ ပိုပွီးတော့ တိတိကကြ ပွောရမယျဆိုရငျ နိုငျငံသားလကျမှတျ (၁၉၄၈ နိုငျငံသား ဖွဈမှုဆိုငျရာဥပဒေ နှဈခုအနကျ တဈခုခုအရ ထုတျပေးတဲ့ နိုငျငံသားလကျမှတျ) လကျကိုငျရှိတဲ့သူကိုမှ နိုငျငံသားဖွဈပွီးသူလို့ သတျမှတျတာဖွဈတယျ။ (အရငျ ဥပဒအေဟောငျးဖွဈတဲ့) ၁၉၄၈ ခုနှဈ၊ ပွညျထောငျစုမွနျမာနိုငျငံသားဖွဈမှု အကျဥပဒေ ပုဒျမ ၆(၁) အရ ဒှိဟဖွဈနိုငျစရာရှိတဲ့ သူကို နိုငျငံသားပေးတာပဲဖွဈဖွဈ၊ ပုဒျမ ၆(၂)အရ ယတိပွတျ သံသယ ကငျးနိုငျတဲ့သူကို နိုငျငံသားပေးတာပဲဖွဈဖွဈ၊ ပေးအပျလိုကျတဲ့ နိုငျငံသားကတျပွားတှမှော ၆ (၁) ဒါမှမဟုတျ ၆(၂) လို့ ပါရှိပါလိမျ့မယျ။ အဲသလို ရေးမှတျ ပုံနှိပျ ပါရှိတဲ့ နိုငျငံသားလကျမှတျတှကေို ကိုငျဆောငျထားတဲ့ သူတှကေိုမှသာလြှငျ (ယခု တညျဆဲဥပဒဖွေဈတဲ့) ၁၉၈၂ နိုငျငံသား ဥပဒကေ အဲဒီလူတှဟော နိုငျငံသားဖွဈ ‘ပွီး’သူ တှဖွေဈတယျလို့ သတျမှတျတာဖွဈပါတယျ။ (အခွားတဈဖကျမှာ ကြှနျတျောတို့ တိုငျးရငျးသားတှကေတြော့ မှေးရာပါအခှငျ့အရေးအရ နိုငျငံသားဖွဈကွသူတှေ (Citizens by Birth) ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့တိုငျးရငျးသားတှေ၊ မြိုးနှယျစုတှဟော မွနျမာနိုငျငံသားတှေ ဖွဈတယျလို့ ၁၉၈၂ ခုနှဈ မွနျမာနိုငျငံသားဥပဒေ ပုဒျမ ၃ မှာ ပွဋ်ဌာနျးထားပါတယျ။ ဒီတော့ နိုငျငံသားဖွဈ ‘ပွီး’ သူ ဆိုတာ မှေးရာပါ အခှငျ့အရေးအရ နိုငျငံသားဖွဈတဲ့ တိုငျးရငျးသား ဟုတျရငျဟုတျ၊ မဟုတျရငျ ‘နိုငျငံသား လကျမှတျ’ ရပွီးသားသူ ဖွဈရမယျ။
Previous ပွညျထောငျစဈစဈတှပေေါငျးထားတဲ့ ပွညျထောငျစု စဈစဈ ကိုသာ အလိုရှိတယျ
Next နိုငျငံ၊ လူမြိုးနှငျ့ အခြုပျအခွာအာဏာကို စောငျ့ရှောကျသော ဥပဒေ (အပိုငျး ၂)
နိုငျငံ၊ လူမြိုးနှငျ့ အခြုပျအခွာ အာဏာကို စောငျ့ရှောကျသော ဥပဒေ (အပိုငျး ၁) – laws | Kyaw Zaw Oo's Blog says: